यी १२ राशिमध्ये यी २ राशिका व्यक्ति हुन्छन् पढाईमा निकै तेज, तपाईको कुन राशि ? – Sandesh Press
यी १२ राशिमध्ये यी २ राशिका व्यक्ति हुन्छन् पढाईमा निकै तेज, तपाईको कुन राशि ?
July 20, 2021 373
काठमाडौँ । दुनियाँमा हरेक दिमाग वा शक्ति या त इन्टेलिजेन्स अरुको भन्दा फरक हुने गरेको पाइन्छ । कोही व्यक्तिको दिमाग अरु कुनै व्यक्तिको तुलनामा बहुतै तेज हुने गर्दछ । यसलाई हामीले आइ क्यु पनि भन्ने गर्दछौँ ।
तपाईले देख्नुभएकै छ होला कुनै व्यक्ति कठिन भन्दा पनि कठिन चिजलाई एकदमै सरल तरिकाले समाधान गरिदिन्छन् । त्यस्तै कोही यस्ता हुन्छन् । जो सरल चिजलाई पनि समाधान गर्नमा बहुतै समय लगाउने गर्दछन् । के तपाईलाई थाहा छ ? शास्त्रअनुसार हाम्रो राशिले हाम्रो मानसिक स्थिितमा पनि असर पार्दछ ।
आउनुहोस् जानौँ ती राशिका बारेमा जो पढाईमा अत्यन्तै तेज हुने गर्दछन् ।
सबै १२ राशिक चिन्हहरू मध्ये, त्यस्ता दुई राशि चिन्हहरू छन् जसका मानिसहरूलाई सबैभन्दा बुद्धिमानीको रूपमा मानिन्छ। यी दुई राशिको चिह्न सम्बन्धी व्यक्तिहरूले जीवन र कठिनाई दुवैमा समस्याहरूको समाधान गर्दछन्।
वृश्चिक र कुंभ राशिका मानिसहरु सबै भन्दा बढी बुद्धिमानी मानिन्छ। वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूको बुद्धिमत्ता एकदमै छिटो हुन्छ।वृश्चिकका मानिसहरूलाई मूर्ख बनाउन यो एकदम असम्भव छ। यी व्यक्तिहरू दिमागको एकदमै तीखो हुन्छन् र यिनीहरुले आफ्नो जीवनमा केही गर्ने ठान्दछन् भने त्यसलाई पुरा गरेर नै छोड्दछन् ।
कुम्भ राशिका मानिसको आइक्यु सबैभन्दा तेज मानिने गरिन्छ । यस राशिको सबै मानिसहरू केही न केही खोजी र कुनै कुरा खोज्ने र जोड्नमा तत्पर भइरहन्छन् र यिनै कुरामा नै आफ्नो समय गुजार्ने गर्दछन् ।
यसो गर्नाले यिनीहरुको मानसिक क्षमता झनै बलियो हुने गर्दछ । जुन तिनीहरूको मानसिक क्षमतालाई अझ बलियो बनाउँदछ। यस्ता व्यक्तिहरुले हरेक कुराको पछाडि कारण खोज्ने गर्दछन् । यदि केही कुराको कारण नजानेमा यिनीहरुलाई सन्तुष्टि नै मिल्दैन ।
Prevपुरुष बिना महिलालाई केही फरक पर्दैन तर महिलाविना पुरुषको जिन्दगी अन्धकार नै हुन्छ
Nextकाठमाडौंमा लागु हुने भयो अनौठो नियम, सर्वसाधारण पनि अचम्ममा !
चितवनक सुजिता प्रकरण : एक पछी अर्को रहस्य बाहिरियो
यी ५ वास्तु दोष छ भने, घरमा झगडा हुने गर्दछ – तपाईको पनि छ कि ?
३० वर्षे पुरानो ग्यास्ट्रीक पनि ५ मिनेटमा निको पार्ने के हो यो अचुक औसधि
देउवा सरकारले आजैबाट लागु हुने गरि गर्यो यस्तो नयाँ निर्णय
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (7302)